China Solar Parking Lot Lights China Manufacturers & Suppliers & Factory
Solar Parking Lot Lights - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Solar Parking Lot Lights)
30W N'èzí okporo ụzọ okporo ụzọ okporo ụzọ
Ụzọ anyị na- ahụ maka ìhè anyanwụ dị mfe maka nrụnye, ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị nchebe na-enweghị mkpa maka wiwi ma ọ bụ trenchi. Nke a dị n'èzí n'anyanwụ na-ekpuchi ya, mmiri na-adịghị ahụkebe ya na aluminum. Igwe ọkụ anyanwụ na-enwu gbaa bụ 6-7 awa zuru ezu na ebubo na 30w mgbidi na-agbanye ọkụ anyanwụ enye...
40 Watt Anyanwụ na-akwado Ogwe Ọdụm Ogwe
Ọkụ ọkụ ọkụ 40W anyị bụ ike kachasị ike nke anyanwụ nwere ike ịkwado bọmbụ ọkụ . Igwe Uhie Mbara Igwe nke 40 a ga-eji dochie ogwe ọkụ nke 120W gị ma ọ bụ ọkụ ndị yiri ya. Nke a na-eme ka anyanwụ na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala, n'okporo ámá, ebe izugbe, ebe dị iche iche, ogige ntụrụndụ, ebe a na-emepe emepe, ebe...
50W Epeepe n'èzí na-echekwa ebe ụgbọala Lot Street Lighting
Ngwakọta niile na-ejikọta na nke kachasị ọhụrụ na teknụzụ na-enwu ọkụ na-eme ka ogwe ọkụ ndị a na-acha ọkụ na- acha n'èzí onye otu onye ndu mgbe ọ na-abịa ịchebe gburugburu ebe obibi gị. Ogwe igwe eletrik dị elu dị na mbara igwe na-eji ọkụ ọkụ nyefee ìhè nke iri asatọ na-aga n'ihu na ụgwọ ọrụ zuru ezu na-enye...
Solar Parking Lot Lights solar parking lot lights Led Parking Lot Light 300w Led Parking Lot Light Solar Post Top Lights Solar Powered Post Top Lights Led Parkint Lot Light Alibaba Solar Street Light Uk